usayizi Sandblasting Media Market kulindeleke ukuba sifinyelele USD 441,9 million 2023 - China Shanghai Bosun Abrasive
Sandblasting Usayizi wemidiya Market Kulindeleke ukuthi sikhule ngo-6.5% CAGR kusuka 2016 kuya 2023. usayizi emakethe sandblasting abezindaba Global, emqulwini imigomo, ukuba kukhule nje ngaphansi 6% CAGR. US sandblasting usayizi abezindaba emakethe ukuba idlule USD 96 million 2023.
Robotic blasting izinhlelo baqhubeka bamukela ukuze uthuthukise kwenkululeko sandblasting usayizi emakethe abezindaba ezindaweni lapho izidingo ukulawula izinga kungukuthi wasutha ngu zifane ezishintshayo izixazululo. Industries kuhlanganise electronics Aerospace, yezimoto, wezokwelapha kanye umthengi enze ukusetshenziswa lokhu imishini izinhlelo zokusebenza eziningana kuhlanganise ukususwa impahla, impumuzo ukucindezeleka, isikhunta yokuhlanza, ukulungiselela ebusweni, enamathela ukususwa kudubuleke peening.
Izici Akuphoqelekile ahlinzekwa ezifana Servo elawulwa positioner rotary, Automated abezindaba ukugeleza control, othomathikhi kuqhuma ingcindezi control, rotary nesijula amakhono, ngokwezifiso iqoqo idatha, kombiko, yokutakula othomathikhi kungenzeka ukushayela funa. US sandblasting usayizi abezindaba emakethe kulindeleke ukuba idlule USD 96 million 2023.
Sandblasting izicelo yabezindaba emakethe zihlanganisa ukusetshenziswa Abrasives ukusika, roughen, evele bushelelezi, ihlanzekile noma sula, noma ukususa izinto ukuthi iguqule ebusweni Ubukhulu noma umumo. Ngaphezu kwalokho, lezi zinhlayiya olwalwenza nazo ayesetshenziswa ngezindlela camera bese zihlanganiswa izinhlelo zokusebenza eziningana kuhlanganise wokucwebezelisa, ukuzisika, ebusweni yokuqedela, futhi igaya. Industries ezifana ukwakhiwa, yezimoto, Aerospace nezezimboni izindawo ezinkulu ekugcineni.
imininingwane eziyinhloko ezatholwa futhi ezazikulo mbiko zihlanganisa:
Aluminium oxide blasting olwalwenza emakethe zaba kuka-10% we share umkhakha ngo-2015 futhi kulindeleke ukuba sikhule ngo-7.2% CAGR kusuka 2016 kuya 2023. It luncanyelwa izicelo ezikhethekile lapho othile ebusweni sekugcineni liyadingeka ukuthi olungisisa zindleko ezengeziwe.
Steel shot namatshana kulindeleke ukuba sithole umkhakha share okukhulu kusukela 2016 kuya 2023 ngenxa yokusetshenziswa okukhulu kuqhuma wokuhlanza wemboni yokususa isigayo esikalini, nopende nokugqwala kusuka evele steel.
share Silica sandblasting abezindaba emakethe wabusa ukusetshenziswa global ngo-2015 Lokhu funa ngokuyinhloko evela Asia Pacific, lapho impahla uthola bekholelwa ngenxa ukungabi khona imithetho efanayo kulabo sekuyabonakala emazweni ukhiye European, kanye aphansi intengo iphuzu kuqhathaniswa izinto okunye.
Asia Pacific sandblasting share abezindaba emakethe wayephezu 45% ngo-2015 Obalulekile izimpahla onensika wemboni futhi ekhula ezisetshenziswa kwingqalasizinda sisihle ezingaphansi kwalelo gatsha.